Hayi, bambalwa abantu abakwazi ukukhusela izifo ezixhaphakileyo zesibindi namhlanje. Yintoni ekhokelela kwisifo? Yaye indlela yokuziphatha, ukuba isibindi siphumelele? Ngoko, izifo zesibindi kunye nokutya kwezigulane zesibindi ziyinhloko yengxoxo namhlanje.
Kungakhathaliseki ukuba uceba ntoni, ukubaluleka kwanoma kukuphi ukutya kugcinwa kuphela xa ubhaka okanye ubilisa, kodwa kungekhona xa ukhanda. Kwaye ukugulisa izigulane ezineengxaki zesibindi ngokuqhelekileyo kufuneka zilawule ukutya okuthosiweyo, kuba ukudibanisa kwamafutha othosiweyo kunokudala umthwalo wokunyuka komsebenzi kwanomsebenzi weziko eliphilileyo. Kwaye izigulane ezininzi ziyazi ukuba ukutya okunamafutha akunakuncedo, njengokuba kuqhutywe isisindo esinamandla kwisibindi kunye nesilonda senyama: ukutya okunamafutha kunakhokelela ekunciphiseni okunamandla kwe-gallbladder kunye ne-salvo ejection enamandla ye-bile, kwaye ukuba kukho amatye, yonke into iphela bhedlele. Kuyafana nokutya okunomsoco, ukutya okunesonka (i-pickle, i-marinades), ukutya okunzima ukugaya (shish kebabs, njl).
Okokuqala, zonke izigulane ezinobungozi kufuneka zifakwe ngaphandle kokutya kokutya kunye namafutha anzima. Kukho ezininzi kwi-ngulube kunye namafutha e-mutton, njengoko amafutha acutshungulwa yi-bile, kwaye inomonakalo wesibindi ayivelwanga ngokwaneleyo. Ngenxa yoko, iimveliso ezingaphumelelanga zixakeke isibindi, zonke ezo zihlala zihamba kunye neempawu ezahlukahlukeneyo zentlungu. Kwaye apha, ngokuchasene noko, kuncedo kakhulu, ngoko ke yimifuno yemifuno. Ukugonywa kwabo emzimbeni kulula, ngaphandle kokuba bane-choleretic effect. Nangona kunjalo, ukuba umntu unesifo se-urolithiasis, ii-oyile zemifuno kufuneka kwakhona ziphathwe ngononophelo. Emva koko, ukusetyenziswa kweoli kwimihlaba engaphezu kweethathu kwiipuni ngexesha, kunokuqinisa nokukhawulezisa ukunyuka kwamatye, okubangela ukuba i-colic.
Ngokumalunga nomda onobungozi kwaye uncedo kumafutha esibindi ibhotela kunye nekhilimu omuncu. Azingathathi hlangothi njengoko kunokwenzeka. Kodwa apha kwakhona kubalulekile ukukhumbula isiqhelo. Kwaye kufuneka uphephe i-margarine eyahlukeneyo, kuba iyimveliso yemvelaphi yokufakelwa kwaye igalelo ekudaleni umthwalo owongezelelweyo kwisibindi.
Ngeengxaki ezahlukahlukeneyo zesibindi, izitya ngegalikhi, i-anyanisi, i-horseradish, isardard, isithombo, isithombo asizixhamli-ziqulethe iibisi ezifunekayo ezinamandla kakhulu, zibangele i-spasms kwi-muscle ehlaziyileyo yesibindi kunye nokuhlaselwa kwe-colic. Impembelelo efanayo ifumaneka ngeengqumbo ezahlukeneyo: iipilisi ezahlukeneyo, i-curry, njl njl. Akukho nto engenakunobungozi, kunye nezilwanyana ezixhamlayo zesilonda - isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, i-coriander, i-dill kunye ne-parsley. Kodwa kunye nabo, ukuba unengxaki ngesibindi, kufuneka uqaphele.
Isizathu sesifo sesibindi singaphakathi kwethu
Izifo zesibindi zenzeke ngokungaqhelekanga, ukungondleki ngokungavumelekanga kwaye xa zithwele kakhulu izinto ezinobungozi. Kwaye oku akukhona nje utywala, nangona ngokuqinisekileyo kukhokelela kuloluhlu oludabukisayo - lunokuba yiziyobisi ozenzayo rhoqo, okanye zonke iintlobo zevarnishes, iipende, i-glue, i-petroli, iimpompo ophefumulayo kwimeko yomsebenzi wakho. Oku kuqulethwe kwiidigarethi otshaya (nangona ungumtshayidi - uyonakalisa isibindi). Olu luhlu lweetyhefu eziveliswa kwiiscuphe zesigulane esiswini, kunye nezinye izithako zokutya ezifakelwa ngumzimba kwinkqubo yokutya. Kwaye kukho "iinqwelo" ezikhethekileyo ezijolise ekubhubhiseni i-niche yesibindi - ezi ziintlobo ezahlukeneyo ze-virus ye-viral hepatitis kunye nezinye iintsholongwane ezingenasiphene. Bayakwazi ukutshabalalisa iiseli zomzimba wethu, kwaye ezi zinto ziwayo zihlanjululwa yintsholongwane efanayo. Inkathazo yazo zonke ezi mpe mbelelo ibangela i-hepatitis (ukuvuvukala) kunye ne-steatosis (ukuqokelela kwamafutha kwiseli ye-hepatic).
Isifo esinjalo, njenge-steatosis, sinokudlula ukutya okuninzi okunamafutha, ngakumbi kwimvelaphi yezilwanyana - kulo mzekelo, amafutha ayinaso ixesha lokuphelisa ngokupheleleyo kwaye aphinde aphinde aphinde aphinde aphinde ayenze, kwaye okokuqala aqokelele kwiiseli zesibindi, kwaye ke azikho indawo ezaneleyo kuzo, gcwalisa indawo ephakathi. Inkoliso kaninzi le nkqubo ichaphazela abantu abakhulu kakhulu. Ngokwemvelo, isibindi esinjalo asikwazi ukusebenza ngokuqhelekileyo, kwaye inkqubo ye-pathological is increasing. Kukho ukwanda okweqile kwi-cholesterol, uxinzelelo lwegazi. Ngaloo nto, esi sifo asiniki naziphi iimpawu, isibindi asikwazi ukulimaza, kuba sele siphelile. Ukuba unamava e-hypochondrium ekunene, kuba intlungu kwi-gallbladder. Kubalulekile ukuba nangoko ncokola ne-gastroenterologist-mhlawumbi kusekho ithemba lokuba lo mbhobho ungaphila ngaphandle kokuhlinzwa. I-Ultrasound, i-tomography ekhompyutheni, i-imaging magontic resonance imaging inceda ukufumanisa i-steatosis.
Ukuthintelwa kwe-steatosis kuqukunjelwa ukuphelisa impembelelo yezinto ezinobuthi, unyango olusifikile ngexesha le-diabetes mellitus (ukuba kukho), ukutya okunokulinganisela, kwimpumelelo yokulwa nezifo ezingapheliyo zesistim sokutya. Izigulane ezithatha ama-hormone ixesha elide kufuneka zithathe iziyobisi eziphucula umsebenzi wesibindi sokuthintela.
I-Cirrhosis - "umbulali onothando"
I-cirrhosis yesibindi yimbangela yezifo ezinjenge-hepatitis B kunye no-C, kwaye ngokubanzi nayiphi na isiphumo esiyingozi kwisibindi, umzekelo, ukusetyenziswa kotywala. Nge-cirrhosis, izicubu ezixhamlayo zesibindi zikhula, ukutshintsha nokutshintsha iiseli ezisebenzayo zesibindi. Isi sifo esibulalayo sihamba ngokukhawuleza: iimpawu zayo zibonakala kubantu kuphela kwiminyaka embalwa emva kokuqala kwenkqubo ye-pathological.
Ngokuqhelekileyo, isibindi sinamandla okuphucula, kodwa nge-cirrhosis, ukunikezelwa kwegazi kwiiseli zesibindi kuyaphazanyiswa yi-tissue ye-conjunction engaphezulu, kwaye abasakwazi ukujamelana nemisebenzi yabo, njengangaphambili.
I-Cirrhosis ifunyaniswa, njengommiselo, sele sele iphuhliswe ngxaki. Okwangoku, ukuba isifo sifumaneka kwisigaba sokuqala, umgangatho wesigulane kunye nokulinda ubomi kunokunyuswa kakhulu ngoncedo lwonyango olufanelekileyo.
I-Fluconazole ye-thrush: imiyalelo yokusetyenziswa, ukuchaswa, ukuhlolwa kwegqirha
Indima yeep peptides emzimbeni womntu
Unyango lwe Spa
I-Herpes, okanye eqhelekileyo "kubanda" emlonyeni
Iingenelelo kunye nokungalunganga komtshato weendwendwe
Umyeni wam walahlekelwa ngumsebenzi
I-raberryberry meringues nge chocolatelethi
Oko okufunayo ukuthenga esikolweni kubalimi bokuqala
I-pizza kunye nenkukhu elunxwemeni nge-sauce eneemichiza ezivumba
Iqoqo le-Valentine Yudashkin e-Paris Fashion Week
I-Aromatherapy kumayeza omntu namhlanje
Iipropati kunye nokusetyenziswa kweoli ye-lavender ebalulekileyo
Umgangatho onceda ukuphumelela
Izityalo ezingenakuthobeka kwikhaya lakho
Isobho esomileyo esomileyo